Xinhua Myanmar - မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားပြီးနောက် လိုက်ဘေးရီးယား အကျဉ်းထောင်မှ အကျဉ်းသား ၉၀ ဦး ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်
မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားပြီးနောက် လိုက်ဘေးရီးယား အကျဉ်းထောင်မှ အကျဉ်းသား ၉၀ ဦး ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်
လိုက်ဘေးရီးယားနိုင်ငံ မြို့တော် မွန်ရိုးဗီးယားရှိ ဝန်ကြီးဌာနဆိုင်ရာ စုပေါင်းရုံးစီမံကိန်းအား တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ) Africa & Middle East
မွန်ရိုးဗီးယား၊ ဧပြီ ၂ ရက် (ဆင်ဟွာ)
လိုက်ဘေးရီးယားနိုင်ငံ အရှေ့တောင်ဘက်ပိုင်း မေရီလန်းကောင်တီရှိ အကျဉ်းထောင်တစ်ခုတွင် မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားပြီးနောက် ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားသော အကျဉ်းသား ၉၀ ဦးအား စတင်ရှာဖွေလျက်ရှိကြောင်း ရဲအရာရှိက ဧပြီ ၁ ရက်၌ ပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါ အကျဉ်းသားများသည် မတ် ၃၁ ရက် ညနေပိုင်းက Harper Central အကျဉ်းထောင်မှ ထွက်ပြေးသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း အမျိုးသားရဲတပ်ဖွဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Moses Carter က လိုက်ဘေးရီးယားနိုင်ငံ မြို့တော် မွန်ရိုးဗီးယား၌ သတင်းထောက်များအား ပြောကြားခဲ့သည်။
“အကျဉ်းသားတွေ ပြန်လည်ဖမ်းမိဖို့အရေး ဒေသခံတွေရဲ့ အကူအညီလည်း လိုပါတယ်” ဟု Carter က ပြောခဲ့သည်။
မော်တော်ဆိုင်ကယ်စီးနင်းသူတစ်ဦးကို သတ်ဖြတ်သူဟု စွပ်စွဲခံရသူတစ်ဦးအား ရှာဖွေရန် အကျဉ်းထောင်အဆောက်အအုံအတွင်းသို့ ဆန္ဒပြသူအများအပြား ချိုးဖျက်ဝင်ရောက်လာခြင်းကြောင့် အကျဉ်းထောင်၌ မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး အကျိုးဆက်အဖြစ် ထောင်ဖောက်မှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း Carter က ပြောခဲ့သည်။
မေရီလန်းကောင်တီတွင် မတ် ၂၅ ရက်က အသက် ၂၂ နှစ်အရွယ် မော်တော်ဆိုင်ကယ်စီးနင်းသူတစ်ဦး အသတ်ခံရမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သံသယရှိသူအား “အမြန်ဆုံးစစ်ဆေးစီရင်ပေးရန်” ဆန္ဒပြသူအများအပြားက လွန်ခဲ့သောရက်များအတွင်း လမ်းမပေါ်သို့ထွက်ကာ တောင်းဆိုလျက်ရှိသည်။
လိုက်ဘေးရီးယားနိုင်ငံ သမ္မတ George Weah က မေရီလန်းကောင်တီတွင် အကျဉ်းသား ၉၀ ထွက်ပြေးသွားပြီးနောက် ဧပြီလ ၁ ရက်မှ စတင်သက်ရောက်မည့် ညမထွက်ရအမိန့်ကို ပြဌာန်းထားကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
90 inmates escape from Liberian prison after fire incident: police
MONROVIA, April 1 (Xinhua) -- Police in Liberia on Thursday confirmed they have begun searching for 90 inmates who escaped followingafire incident ataprison facility in the country's southeast county of Maryland.
National Police spokesperson Moses Carter told reporters in Monrovia, the Liberian capital, that the inmates escaped from the Harper Central correctional facility on Wednesday evening.
"We're seeking the help of residents to have these inmates rearrested," said Carter.
A fire at the prison premises, which was caused by protesters who in large numbers broke into the facility compound in search of an alleged killer ofamotorcyclist, has resulted in the jailbreak, said Carter.
According to the local media, many protesters have taken to the streets in Maryland in the past days demanding "the speedy trial" ofasuspect accused of murderinga22-year-old motorcyclist on March 25 in the county.
Reports of local media also said Liberian President George Weah has imposedanight-time curfew on the coastal county with effect from Thursday "until further notice" after the escape of 90 inmates. Enditem
Aerial photo taken on May. 1, 2019 shows the China-aided Ministerial Complex project in Monrovia, capital of Liberia. (Xinhua)
Previous Article ဂီနီနိုင်ငံတွင် အီဘိုလာရောဂါကူးစက်မှုအသစ် ဖြစ်ပွားပြီး လူ ၃ ဦးသေဆုံးကြောင်း အာဖရိက CDC ထုတ်ပြန်
Next Article ဆူဒန်နိုင်ငံရောက် တရုတ်နိုင်ငံ ငြိမ်းချမ်းရေးထိန်းသိမ်းမှု အင်ဂျင်နီယာတပ်ဖွဲ့ဝင်များက ပထမဆုံး ဒေသဖြတ်ကျော် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတာဝန်များကို အရည်သွေးမြင့်ပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့